merolagani - काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने, कति पाउँछन् सर्वसाधारणले शेयर ?
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने, कति पाउँछन् सर्वसाधारणले शेयर ?
Jul 21, 2021 03:19 PM Merolagani
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)ले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने भएको छ। छिट्टै बस्न लागेको साधारण सभामा कम्पनीले उक्त प्रस्ताव लैजाने भएको छ। कम्पनी स्थापना हुँदाका बखतमै सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
कम्पनीले यस अघि शेयर जारी गर्ने भनेको भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको थिएन। कम्पनीले हालै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्न सुरु गरेसँगै उसको बजार बिस्तार भएको छ। यद्यपि अहिले मेलम्ची बाढीकाे प्रभावमा परेको छ। तथापि दसैँ भन्दा अघि नै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा पुन: वितरण गर्ने गरी काम सुरु भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरेसँगै उसको व्यवसायिक यात्रा थप बलियो बन्ने अनुमान गरिएको छ। जसको कारण पनि अब सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नु पक्षमा कम्पनी पुगेको शाक्यको भनाई छ।
हाल कम्पनीमा सात संस्थापक रहेका छन्। सबैभन्दा बढी महानगरपालिकाको शेयर स्वामित्व छ। काठमाण्डौ महानगर पालिका र ललितपुर महानगर पालिकाको जम्मा प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ दरका एक लाख २० हजार कित्ता शेयर छन्। सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने संस्थापकहरूमा नेपाल सरकार दोस्रो स्थानमा छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको ९० हजार कित्ता शेयर छ। यसै गरी उद्योग वाणिज्य महासंघको नौ हजार कित्ता,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको २७ हजार कित्ता,भक्तपुर उद्योग वाणिज्य महासंघ र ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघको ४५ सय कित्ताको दरको शेयर स्वामित्व छ।